Sajoo Ol kaa'i cuqaasi yookiin furtuuwwan qaxxaamuraa AjajaCtrl+S dhiibi.
Galmichi karaa fi maqaa isaa, gidduugaleessa deetaa qeeyyee ammaa irratti yookiin ooftuu cimdaa yookiin intarneetii irratti,faayilii kamiyyuu maqaan walfakkaatu irraba gochuun, jalatti ol kaa'ameera.
Yommuu faayilii haaraa yeroo jalqabaaf ol keessu, qaaqni Akka Olkaa'i kan keessatti maqaa, ukaankaa fi ooftuu yookiin faayiliif qabee galchuu dandeessu ni banama.Qaaqa kana banuuf, Faayilii - Akka Olkaa'i fili.
Dheertoo ofumaa gara maqaa faayiliitti
Yommuu faayilii ol keessu, LibreOffice yeroo hundumaa maqaa faayiliitti dheertoo milteessa, yommuu maqaan faayilii durumaan dheertoo gosa faayiliitiin walsimu qabateerraan ala. Tarree Dheertoowwan ODF ilaali.
Fakkeenyonni muraasni dheertoowwan ofumaatiif gabatee armaan gadii keessatti tarreeffamaniiru:
Ati maqaa faayilii kanaa galchita
Ati gosa faayilii kanaa filatta
Faayiliin maqaa kanaatiin ol kaa'ama
Title is: Galmeewwan Ol kaa'uu